Egwuregwu Olimpik Oge Oyi. Ọ bụ ịga n'ihu gị nọ n'ihe egwu? | Network Meteorology
Egwuregwu Olimpik Oge Oyi. Ọ bụ ịga n'ihu gị nọ n'ihe egwu?
Estylegbapụ Freestyle na Olympic
Ọ bụ naanị obodo isii nke ga-eme Winter Olympics na narị afọ gara aga ga-adị jụụ iji kwado ha. Ọbụna maka atụmatụ mgbanwe ihu igwe kachasị, naanị obodo iri na otu n’ime obodo iri na itoolu ndị kwadoro Winter Olympics nwere ike ime ya n’ime iri afọ ndị na-abịanụ dịka nnyocha nke Mahadum Waterloo (Canada) na emenlọ Ọrụ Managemen na Innsbruck (Austria) mere.
Omenala ọdịnala nke ememme egwuregwu a na-eme n'oge oyi na-abawanye n'ihe egwu dịka Prọfesọ Daniel Scott kwuru, onye isi nyocha na World Tourism Organisation (GT) na onye ntụzi nke ọmụmụ a. “Mpaghara pere mpe na mpaghara pere mpe metụtara egwuregwu oyi nwere ike ịnabata egwuregwu Olympic na a ụwa kacha ekpo ọkụ"kwuru.
Egosiri anyị na ebe ndị ahọpụtara ọzọ iji kwado egwuregwu a, dịka Squaw Valley (USA), Garmisch-Partenkirchen (Germany), Vancouver (Canada) na Sochi (Russia) agakwaghị enwe ihu igwe kwesịrị ekwesị. kwesịrị ịnabata egwuregwu maka etiti 6st narị afọ. Site na okpomoku a na-eche anya maka iri afọ ndị na-esote, naanị obodo XNUMX ndị nabatara ha ga-ejigide ọnọdụ ihu igwe dị mma maka emume ha.
Organihazi obodo otutu egwuregwu Olympic
Nkwupụta a na-elekwasị anya na ọ ga-ekwe omume nke ịga n'ihu nke Olimpik Oyiyi n'ihe gbasara omume nke mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ arụmụka siri ike ịhụ etu anwuru si emetụta mba ndị na-ahazi egwuregwu ahụ, ma eleghị anya n'ụzọ a ọ ga-ekwe omume ịdọrọ uche nke Kọmitii Olimpik Mba Niile (ICO) na ndị isi ụwa isi na mbelata nke anwuru. akwa.
Mkpa ọ dị maka atụmatụ ịchịkwa ihe egwu ihu igwe maka ndị na-ahazi egwuregwu ahụ abawanyela n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọnọdụ okpomọkụ kwa ụbọchị na February, nke bụ mgbe a na-eme egwuregwu ahụ, arịwo site na 0,4ºC n'etiti 1920 na 1950, na 3,1ºC n'etiti 1960 na 1990, rue mgbe 7,8ºC ruru na narị afọ XXI.
Taa ọ ga - esi ike iche n'echiche na - enye afọ ojuju nke egwuregwu na - ejighi ihe eji eme ihe iji mepụta ice na snow, dịka emere n'afọ iri mbụ nke emume ha.
Nnyocha ahụ na-egosi na n'ịga nke ọma nke egwuregwu ahụ, inwe ihu igwe dị mma dị ezigbo mkpa, ebe ajọ ihu igwe bụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị na kọmitii na-ahazi na-eche ihu. Ihu igwe na-ekpebi ohere ịkwadebe egwuregwu ahụ ma nwee ike imetụta ma ime ụlọ ma n'èzí, yana asọmpi n'èzí, nkasi obi nke ndị na-ekiri ekiri, njem na ọhụụ na usoro mgbasa ozi telivishọn.
Ọmụmụ ihe a na-enyocha etu esi eji teknụzụ na atụmatụ emepụtara kemgbe ọtụtụ iri afọ iji merie ihe egwu ihu igwe na Winter Olympics.
Teknụzụ dị ka snow keakamere, ntu oyi aka, na amụma amụma mkpebi dị ugbu a dị oke mkpa maka egwuregwu ga-aga nke ọma. Prọfesọ Scott kwuru na agbanyeghị na "agabigaghị n'ihu na teknụzụ, enwere oke nke usoro njikwa akara ihu igwe ugbu a enweghị ike." "N'ime etiti narị afọ a, a ga-emeri njedebe ndị a na ụfọdụ obodo na-akwado egwuregwu ahụ."
Ọdịdị nke ọmụmụ a na-enye anyị ohere dị ukwuu ịtụgharị uche na mmetụta dị ogologo oge nke mgbanwe ihu igwe nwere ike inwe na ụwa nke egwuregwu na ọdịbendị ụwa nke egwuregwu Olympic. Ọ na-ekpughekwa na maka ụfọdụ obodo na mpaghara nwere mmasị ịhazi egwuregwu ahụ, ụbọchị ịgba maka ya na-eru nso kwa ụbọchị.
Ozi ndi ozo: Afọ 2013 ga-abụ nke asaa kachasị ekpo ọkụ kemgbe enwere ndekọ, Thaw ga-enwe ihe dị egwu na njedebe nke narị afọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Egwuregwu Olimpik Oge Oyi. Ọ bụ ịga n'ihu gị nọ n'ihe egwu?
Kedu ụdị mmiri ozuzo yiri?
Ike ikuku. Greenhouses na ngwa ha na oru ugbo